Malunga nathi - Haiyang Luhai Electronic Commerce Co., Ltd.
I-Haiyang Luhai yezoRhwebo ngeKhompyuter.
Haiyang Luhai Electronic Commerce Co, Ltd.yakhiwa ngo-2020 kwisixeko saseYantai, kwaye iifektri zethu ezine zemveliso zikwisixeko saseTai'an. Emva kweminyaka eliqela yophuhliso, amandla emveliso yeglasi agqityiweyo sele efikile kwiitoni ezingama-200,000 ezineefanitshala eziyi-100 kunye nangaphezulu kwemigca engama-20 yemveliso. Ixabiso lazo elipheleleyo leasethi lifikelela kwi-RMB engamakhulu amathandathu ezigidi kwaye inabasebenzi abangaphezu kwe-1000.
Singumenzi wobugcisa ozibandakanya kuphando, uphuhliso, ukuthengisa kunye nenkonzo yeglasi yeglasi yeglasi, ingqayi yokugcina iglasi, ingqayi yeglasi yobusi, iglasi yokupheka ioyile kunye nesosi yokuhambisa, ipepile yeglasi kunye nokugungqa ityuwa njalo njalo. Ishishini lethu lokuthumela ngaphandle lisasazekile kwihlabathi liphela ngeemarike ezininzi eYurophu, eMelika naseOceania kwihlabathi liphela, kunye nomthamo wentengiso weebhotile zeglasi zezona ziphambili kushishino. Kukusukela kwethu okungapheliyo ekubeni ngumvelisi webhotile ephezulu eTshayina kunye nokwenza elona xabiso liphezulu kubathengi bethu, senza imizamo emikhulu yokuphuhlisa iimveliso ezintsha ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo. Inkampani yethu inamava atyebileyo kwiibhotile zeglasi.
U-Luhai unendlela eyomeleleyo yokujolisa kubathengi esekwe kwiziseko zophuhliso ezingcono zenkampani, isebe eliyilo elikhethekileyo, iimvavanyo zolawulo lomgangatho olomeleleyo kuyo yonke imveliso, ukulandelwa rhoqo kunye nengxelo kunye nenkonzo yomthengi esebenzayo kwiqela lethu lobungcali.
Ukubambelela kumgaqo weshishini weenzuzo ezifanayo, siye saba nodumo oluthembekileyo phakathi kwabathengi bethu ngenxa yeenkonzo zethu zobungcali, iimveliso ezisemgangathweni kunye namaxabiso okhuphiswano. Ukuba unayo nayiphi na imibono emitsha okanye iikhonsepthi zeemveliso, nceda unxibelelane nathi.
Luhai ngokunyanisekileyo ukwamkela abahlobo ekhaya nakumazwe aphesheya ukuba baxoxe ngentsebenziswano nathi, ukufuna uphuhliso oluqhelekileyo kunye nokudala ngomso oqaqambileyo!
1.HIGH UMGANGATHO Isiqinisekiso somgangatho wemveliso, kunye nelayisensi yemveliso, ukubonelela ngenkonzo efanelekileyo emva kokuthengisa.
IZIXHOBO ZE-2.FIRST-CLASS Zenzekelayo umhloli webhotile, iscracker crane, ukubanda kunye nokushushu kokugqibela kokulinganisa ukuvavanya umatshini, inkqubo yokupakisha ngokuzenzekelayo, ukupeyinta ngombane.
3. UKUTHENGISA EHLABATHINI LONKE Sineefektri ezininzi ezaziwayo zokwenza imveliso yasekhaya nakwamanye amazwe ezisayine ubudlelwane bokusebenzisana.
INKONZO ye-4.24-HOUR Sineeyure ezingama-24 zenkonzo ye-Intanethi, impendulo ekhawulezileyo yokukunika amava amnandi.
I-5.PROFESSIONAL TEAM Inikezelwe kulawulo olungqongqo lomgangatho kunye nenkonzo yabathengi enolwazelelelo, abasebenzi bethu abanamava bahlala bekhona ukuxoxa ngeemfuno zakho kunye nokuqinisekisa ukoneliseka ngokupheleleyo kwabathengi.
Iimveliso zethu zeglasi zigqithile kwizatifikethi ezininzi ekhaya nakumazwe aphesheya, zonke izinto ezingafunekiyo ziqinisekisiwe kwinqanaba lokutya, ke zonke iimveliso zeglasi zinokusetyenziswa ngokubanzi kwimichiza, amayeza, ukutya kunye nezinye iinkalo.